Sida Loogu Kordhiyo RPC Xayeysiinta PPC 5 Daqiiqo oo leh Google Analytics | Martech Zone
Miyaad isticmaaleysay xogta Google Analytics si aad u xoojiso natiijooyinkaaga ololaha AdWords? Haddii kale, waxaad weyday mid ka mid ah aaladaha waxtarka badan leh ee laga heli karo internetka! Xaqiiqdii, waxaa jira daraasiin warbixino ah oo loo heli karo xog-qodista, waxaadna u adeegsan kartaa warbixinnadan si aad ugu hagaajiso Ololayaashaada PPC-ka guddiga oo dhan.
Ka faa'iideysiga Google Analytics si loo hagaajiyo adiga Ku noqo Ad Spend (ROAS) dhammaantood waa loo maleynayaa, dabcan, waxaad haysataa AdWords-kaaga, iyo Xisaabaadka Google Analytics si sax ah ayaa loo waafajiyay iyo "Himilada" iyo "Ecommerce Conversion Tracking" ayaa shaqeynaya.
Gal Koontadaada Google Analytics. Guji Qaadashada> AdWords> Ololeyaal. Dhagsii Adeegsiga Goobta waxaadna arki doontaa natiijooyinkan cabbirka ah: Kalfadhiyada, Aragtiyada Bogga, Muddada Fadhiga, Kalfadhiyada Cusub, Heerka Bounce, Dhameystirka Himilada iyo Dakhliga.
Shan daqiiqo gudahood, waxaad ku arki kartaa shan shay oo kor u qaadi doona Ololahaaga PPC oo kaliya natiijooyinka caadiga ah:
Kalfadhiyada - Habka asalka ah wuxuu ku tusi doonaa Wadarta Kulamada bartaada, laakiin sidoo kale waad daawan kartaa booqashooyinka PPC ay ku kexeeyeen goobtaada. PPC, sanduuqan, waxay kuxirantahay kaliya 1.81% dhamaan fadhiyada, sababtuna tahay qadar yar oo qarash ah. Boqolleyda Kal-fadhigu waxay kuu noqon doonaan halbeeg lagu qiimeeyo wadarta waxqabadka ololahaaga.
Muddada Kulanka - Celceliska celceliska kal-fadhiyada goobta waa 2:46 (lacag bixin) iyo 3:18. Maaha wax aan caadi ahayn taraafikada PPC inay yeeshaan Muddo Dhexdhexaad Kal-fadhi oo hoose, gaar ahaan bogagga degitaanka ee loogu talagalay goobta, laakiin ujeedku waa in la helo dhammaan booqashooyinkaas illaa ugu yaraan saddex daqiiqo muddadii fadhiga. Hagaajinta Muddada Kulankaan wuxuu noqon karaa Yoolal.
Heerka Kicinta - Heerarka Bounce badanaa waxay ku sarreeyaan Bogagga Degista ee loo yaqaan 'PPC Peduing Pages', maxaa yeelay iyagu waa bogag keliya. Marnaba ma dooranayno inaan ka argagaxno lambarradan sare, illaa aan aragno inay kor u kacayaan 80% .Halkan, waxaan arki karnaa in Heerarka Bounce ee ololuhu u dhexeeyaan 28% ilaa 68%. Waad dooran kartaa inaad hubiso Tabsyada Qalabka ee geeska bidix ee kore, waxaadna ogaataa in dhammaan noocyada aaladaha (Desktop, Mobile, iyo Tablet), tirooyinku ay si fiican ugu dhex jiraan heerka caadiga ah.Hadda, waxaan eegi doonaa Xayeysiiska Ikhtiyaar kooxeed, oo aan helin dhibaatooyin waaweyn.
Dhameystirka Himilada - In kasta oo ololeyaasheena lacagta la siiyay ay ka yihiin 1.81% wadarta Kulamada, waxay abuurayaan oo keliya 1.72% ee Wadarta Dhamaystirka Himilada (Hoggaaminta + Macaamilada). Fikrad ahaan, raashinkani wuxuu la mid noqon doonaa Boqolleyda Kulamada, oo lagu gaari karo iyadoo la hagaajiyo Dhamaystirka Yoolalka illaa 10.2%. Hagaajinta saamiga Yoolalka ee Dhammaystirka Kulamada waxaa si fudud loogu dari karaa Hadaf kale.
Dakhliga - Warka wanaagsan ee ololahan ayaa ah in kaliya 1.81% Booqashooyinka ay soo saaraan 6.87% guud ahaan Dakhliga. Lambarradan, ma dafiri kartid in PPC ay sifiican u shaqeyneyso boggan Awoodda aad ugu leedahay falanqaynta lambarradan ayaa ku tusi kara halka aad awoodid inaad ku kordhiso miisaaniyaddaada oo aanad u gelin qatar weyn inaad lacag ku weydo ololaha PPC. Laakiin ka hor intaadan kordhin miisaaniyaddaas, qaado daqiiqad si aad u qiimeyso waxqabadka ROI iyo Margin. Markaad eegto lambarradan waxay ku siin doontaa jawaab adag oo ah haddii la kordhiyo iyo in kale… laakiin waqti uma hayno inaan arrimahaas oo dhan kaga hadalno hal qoraal!
Marka, shan daqiiqo gudahood, waxaan ku qiranay saddex yoolal oo aan ku horumarin karno:
Kordhinta Muddada Kalfadhiga in kabadan 3:00 bog kasta.
Hagaajinta Saamiga Himilooyinka Dhammaystirka Kulamada (Qiyaasta Ecommerce waa wanaagsan tahay, natiijooyinkuna waxay muujinayaan in Ujeeddada Beddelka ee Barnaamijka Lead Gen ay noqonayso meel fiican oo laga bilaabayo)
Falanqaynta our ROI iyo Margin cabbiraadaha si loo sameeyo go'aan aqoon leh oo aan khatar badnayn ku saabsan kordhinta miisaaniyadda ee ololayaasha PPC.
Fadlan ogsoonow in joogitaankaaga websaydhku ka duwan yahay kuweenna, khibrad walbana ay noqon doonto mid gaar ah. Natiijooyinkaagu waxay la mid noqon karaan kuweenna, laakiin qalabkan ayaa kaa caawin doona inaad falanqeyso natiijooyinkaas, iyadoon loo eegin tirooyinka ay yihiin.
Waxaan sidoo kale jeclaan lahayn inaan ku siino xoogaa kaalmo ah oo ku saabsan hagaajinta yoolalka aad dejisay muddadii shanta daqiiqo ahayd ee aad socotay. Waa kuwan dhowr dariiqo oo fudud oo aad ugu rogi karto Yoolalkaas kuwo dhab ah oo ka caawin kara ololahaaga PPC inuu helo ROI aad u weyn adiga oo aan ka kordhin miisaaniyaddaada wixii aad awoodid.
Hagaajinta Muddada Kalfadhiga
Marka hore, waxaan ku noqon doonnaa Ilaha taraafikada> Xayeysiinta> AdWords.
Marka xigta, waxaan ku eegaynaa waxqabadkeena olole. Shan ka mid ah ololaheena firfircoon, labo waxay leeyihiin Caadi Celis Cashar Dheeraad ah oo ka badan 3:30. Marka, waxaan diirada saari doonaa saddexda soo hartay.
Waxaan haynaa 40 Xayeysiis, 10 ka mid ahna waxay leeyihiin celcelis ahaan Kal-fadhi Kal-fadhiga <2:00.
Under AdWords> Keywords, waxaan ku kala saareynaa Celceliska Kalfadhiga Muddada, oo waxaan ku ogaaneynaa 36 eray-bixinno leh Kal-fadhiyo Celcelis <1:00.
Hadda ka hor inta aynaan bilaabin daminta ereyada muhiimka ah, aan fiirino waxqabadka Meelaha Keyword.
Xullo eray-eray ah oo u deji cabbir Secondary ah celceliska Kal-fadhiga.
Tusaalahan, Ereyga furaha ah ee aan dooranay wuxuu si habsami leh uga socdaa guddiga oo dhan:
Sare 1 - 02: 38 (Meel 1)
Sare 2 - 07: 43 (Meel 2)
Sare 3 - 05: 08 (Meel 3)
Side 1 - 03:58 (Meesha 4)
Qiyaasta Xayeysiiskayaga Celceliska ah ee ereygan - per AdWords - waa 2.7, markaa waxaan horeyba u garaaceynaa bartayada macaan. Si kastaba ha noqotee, haddii Joogitaankayaga Celceliska Xayeysiinta uu ka sarreeyay 2.0 (1.0 illaa 1.9), waxaannu tixgelin doonnaa hoos u dhigista Bidhkeena Max CPC si aan ugu daadagno Meelaha Ad ee waxqabadka sarreeya
Waxqabadka ereyada kale ee muhiimka ah ayaa laga yaabaa inay soo jeediyaan in la kordhiyo Qiimaha Max CPC haddii waxqabadkoodu ku adag yahay Meelaha Ad ee wanaagsan.
Qaar ka mid ah ereyada muhiimka ah ayaa si cad u qalmi doona "hawlgab", waana joojin doonnaa ama ku tirtiri doonnaa koontadayada 'AdWords Account'.
Under Daypart Tab, waxaan ogaaneynaa waxyaabaha soo socda:
4subaxnimo - 00:39
5subaxnimo - 00:43
6subaxnimo - 00:20
Iyadoo lagu saleynayo natiijooyinkaan, waxaan u soconnaa Akoonkeena 'AdWords Account' si aan u hagaajino Jadwalka Xayeysiinta si aan u hubinno in xayeysiiskeennu uusan soconayn inta u dhexeysa 4 subaxnimo ilaa 7da aroornimo.
Kahor intaadan Joojin Kooxaha Xayeysiinta ah, waxaan u baahanahay inaan dib u eegno Boggeena soo-degitaanka ee ku saabsan tayada tayada leh. Tayada ka kooban ayaa muhiim u ah guusha.
Aqoonso oo dib-u-eegis ku sameyso ama tirtirto waxyaabaha jahawareerka, khaldan, khaldan, ama taariikhda ku dhacay.
Su'aal in qaybo gaar ah oo dhab ah loo baahan yahay dhab ahaan.
Tijaabi nuxurka si loo hubiyo in Soo-booqdayaashu ay si fudud u raaci karaan tilmaamaha oo ay u dhammaystiri karaan falalka la doonayo.
Ku hagaaji mawduucyada waxqabadka liita
Samee heerarka waxqabadka ugu yar dib-u-eegis ama tirtirto wax kasta oo ka hooseeya waxqabadka.
Abuur Bogag degitaan oo cusub si aad si fiican isugu waafajiso weydiimaha Raadinta, Waxyaabaha ku Xayeysiinta, iyo Mawduuca Bogga Soo Degitaanka.
Ugu dambeyntiina, Boggeena Degitaan ee hadda ma muuqdaan Muuqaal, waxaana ku adkeysan doonnaa in lagu daro (inbadan oo ka hooseysa hoos u dhigidda Is-beddelka).
Iyadoo lagu saleynayo waxyaabihii aan soo ogaannay intii lagu gudajiray falanqaynta bilowga ah, waxaan go'aansanay in qeybta Lead Gen-ka ee barnaamijkeenu uu kujiro waxqabad. Hadafkeena-mustaqbalka dhow waa inaan ku kordhino Sicirkeena Noqoshada Jecel boqolkiiba 10 kaliya. Halkan waa halka aan ka bilaabi doonno (goobta iyo gudaheeda koontadayada 'AdWords Account')
Qiimeyn lagu sameeyo Boggeena Soo Degida. Xagee dadka u diraynaa? Isticmaalayaashu way bixi doonaan haddii aysan isla markiiba helin waxa ay doonayaan ama u baahan yihiin.
Miyaan si cad u qeexnay waxa ganacsigeenu yahay ama uu yahay?
Miyaan adkeyneynaa xalka Badeecada ama Adeegga halkii laga sifeyn lahaa?
Ma waxaan ka haysannaa Mawduuc Gaar ah oo loogu talagalay Badeecadeena ama Adeeggeenna oo aan laga helin Goobaha Tartamayaasha?
Ma weydiisaneynaa macluumaad aad u badan?
Miyaynu haysannaa Video ku saabsan Bogagga degitaanka? Haddii kale, waxaan dooneynaa inaan ku darno. Khibradeenna, joogitaanka Fiidiyowgu wuxuu bixiyaa wiish u dhexeeya 20% -25% Qiimaha Beddelka, ha ahaadaan ama ha isticmaalin dadka isticmaala runti!
Haddii aynaan haysan PPC Pages Pages Pages, ma waxaan u diraynaa isticmaaleyaasha bogagga shabakadda ee khuseeya oo ay ku jiraan macluumaadka ugu faa'iidada badan uguna saxsan ee ku saabsan Badeecada ama manfacyada ay raadinayaan?
Waa maxay Bixintayadu? Intee in le'eg ayey run ahaantii shaqaysaa? Waxaan dhowaan tijaabinay bixinta Demo ama Tijaabo, iyo Tijaabada tijaabada ah oo lagu fuliyay Demo in ka badan 100%. Kaaga darane, Iibinta Tooska ah ayaa hoos u dhacday 75% ka mid ah isticmaaleyaasha loo soo bandhigay dalabka Demo. Labaddii Lead iyo Dakhligiiba way dhibaatoobeen.
Miyaynu Leenahay Wicitaan Ficil ah?
Miyaynu qabanay wax walba oo aan kari karno si aan u sii-qalanno rajooyinka ama aan uga hor tagno kuwa aan loo baahnayn? Tusaale ahaan, dhowr ka mid ah macaamiisheenna ayaa ku adkaaday codsi shaqo "Xiriiro." Tan waxaa lagu saxay iyadoo la adeegsanayo eray-bixinno xun (Negative keywords) ololeheenna si looga soo baxo weydiimaha noocaas ah (iyo kharash-gareynta qashinka).
Abuur ama Wax ka beddel Qoraallada Xayeysiiska si loo hagaajiyo waxqabadka Xayeysiiska.
Qiimeynta Qiimaha Beddelka ee dhammaan ereyada muhiimka ah. Hawlgab kuwa fulinaya heerarka ugu hooseeya ee waxqabadka (TBD).
Xagee iyo maxay booqashooyinku uga baxayaan Fankayaga (hadafyada) Beddelka Himilada?
Intii aan ku guda jirnay falanqeyntii 5-ta daqiiqo ahayd, waxaan ogaanay in PPC ay fulineyso dhamaan ilaha kale ee taraafikada marka loo eego Boqolleyda Wadarta Iibka iyo Boqolleyda Wadarta Wadarta. Hadda, waxaan ku laabaneynaa Google Analytics si aan u ansaxino kororka Miisaaniyadda PPC.
Falanqeyntan, waxaan ku galnay koontadayada Google Analytics oo waxaan u wareegnay Beddelaad> Astaamo iyo hoosta Type, xulo AdWords. Dejinta Default waa isdhexgalka ugu dambeeya cabbirka aasaasiga ahna waa Olole.
Muuqaalkan wuxuu na siinayaa xog ku saabsan Ololaha, Kharashaadka, Is-dhexgalka ugu Dambeeya, Isdhexgalka ugu Dambeeya CPA, Qiimaha Isdhexgalka ee Ugu Dambeeya, iyo Ku Laabashada Xayeysiinta (ROAS).
Waxaa jira laba arrimood oo waaweyn oo maskaxda lagu hayo inta aynaan guda gelin. Tusaalahan, shirkadu waxay leedahay dhinacyo khafiif ah waxayna ubaahantahay inay lahaato ROAS ah 1,000% (10 ilaa 1 ROI) si ay faa'iido uhesho, waxayna kushaqeyneysay Miisaaniyad yar, taas oo fursad siinaysa koritaan.
Jaleeco ahaan, waxaan aragnaa mid kamid ah shan olole oo leh ROAS> 1,000%. Marka xigta, waxaan u dhaqaaqeynaa aragtida waxqabadka Ad Group, waxaanan helnaa seddex xayeysiis ah oo leh ROAS inta udhaxeysa 2,160% iyo 8,445% siday u kala horreeyaan.
Olole labaad iyo Kooxda Saddexaad ee Xayeysiinta ayaa hadda ku shaqeeya ROAS> 800%.
Waxaan garaaci karnaa bartilmaameedka 1,000% ROAS Goal ololaha labaad adoo curyaaminaya hal ama in ka badan Kooxaha Xayeysiinta. Ololaha kale ayaa durba fulinaya + 38% iyo Goal. Waxaan si kalsooni leh ugula talin karnaa in la kordhiyo Miisaaniyaddayada bil kasta laba olole.
Seddex Kooxood oo Xayeysiis ah ayaa ah kuwa aan ka fiirsan miisaaniyada kordhinta; kan afraad ayaa u soo guuri kara liistadayada ka dib fiicnaanta (dami keyword-ama liisaska alaabada ee liita).
In kasta oo guusha aan la damaanad qaadin, waxaan u maleyneynaa in kororka 50% ee kharashka ay sababi doonto boodh Dakhli oo u dhigma, wax walbana laga fiirsado. Xaaladdan oo kale, $ 700 kasta oo dheeri ah oo kharash ah oo la bartilmaameedsaday, waxaan rajeyneynaa inaan aragno koror $ 11,935 oo Revenue ah!
Maxay Tahay Sababta Waxan oo Dhan
Maamule ahaan SEM, shaqadaadu kuma dhamaanayso markaad taraafikada u wado goob; waa bilaw.
Ku dhex milmo Koontadaada Google Analytics, ka bilow hal warbixin, oo arag inta aad ka heli karto shan daqiiqo oo keliya. Qiyaas intee in ka badan oo aad ogaan doontaa markaad eegto daraasiin warbixino kale oo aad falanqeyn karto!
Tags: yoolalka falanqayntadhacaheerka cigtaololaharaadinta beddelaadraadinta beddelka ecommerceculeysDhameystirka HimiladaAnalytics googleraadinta beddelka falanqaynta googleyoolalka gorfaynta googleIs-beddelka Is-dhexgalka ee Ugu DambeeyaIsdhexgalka Ugu Dambeeya CPAQiimaha Isdhaxgalka Ugu Dambeeyabooqashooyin cusubaragtida boggaraadinta lacagta lehlacag ku bixi halkii maamuleppcmaamulaha ppcku soo noqo xayeysiintaDakhligarosasMaareeyaha Suuqgeynta Mashiinka RaadintaBixiyamuddada booqashadaBooqashada
Sep 15, 2015 at 11: 48 AM
Waa salaaman tahay Chris, tani waa macluumaad xiiso leh, laakiin waxay umuuqataa wax duugoobay maadaama Google ay eraybixintooda ka badaleen wixii aad dib ugu isticmaashay sanadkii 2013. http://marketingland.com/google-changes-menu-options-adds-new-reports-in-google-analytics-61060 Tusaale ahaan, waxay u beddeleen "Ilaha taraafikada" una beddeleen "Qaadasho" iyo "Booqashooyin" hadda waa "Kalfadhiyo."
Sidoo kale, jidkaaga: Ilaha taraafikada> Xayeysiinta> AdWords> Ololeyaal
Hadda waa: Qaadashada> AdWords> Ololeyaal
Iyo, shaashadda ugu horreysa ee aad muujiso sidoo kale hadda way ka duwan tahay… Ma heli doontid Muddada Fadhiga shaashadda mar dambe. Hal dariiqo oo hadda lagu heli karo waa in la aado Qaadashada> Dhammaan Gaadiidka> Isha / Dhexdhexaad ka dibna la shaandheeyo CPC.
Runtii waa faafaahin wanaagsan, laakiin way fiicnaan laheyd inaad tan ku aragto shaashado casri ah, habka iyo xogta.
Waad ku mahadsantahay aragtidaada!
Sep 17, 2015 at 12: 27 PM
Mahadsanid Mark! Chris wuxuu ii soo diray nuqulkii cusbooneysiinta iyo shaashadaha oo aan dib u daabacnay maqaalka.